Herrega Qusannaa labbaik Waadi’aa - Oromia International Bank
Tajaajilli kun herrega qusannaa addaa imala Hajii fi Uneraa gochuuf maamiltoota barbaadaniif filannoo kan kennu yeroo ta’u imalaaf kan ta’u dursanii kan itti qusatanidha.
Amaloota addaa faayidaa tajaajilichaa
Imala Hajii fi Umeraa warren godhaniif karoora isaanii salphaatti kan ittiin raawwatanidha.
Maamilootni keenya musiliimaa imala Hajii fi Umeraa karaa salphaa ta’e akka raawwatan gargaara.
Imala amataa dhimmoota Isilaamummaa Itiyoophiyaa waliin ta’uun qusannicha qarshiin fuudhuun yeroo deemsaa sharafa biyya alaa barbaachisu immoo karooraan qabannee akka dhiyeessinu nu gargaara.
Hanga maallaqaa ka’umsaaf daangeffame hin qabu maamilli hanga human isaa haala isaaf mijateen ni qusachuu danda’a.
Maamilli maallaqa isaa yeroo barbaadetti baafachuu danda’a.
Tajaajilli kun dabtara qusannoo addaatiin kan socho’u ta’a.
Namni qusatu umuriin hin daangeffamu, daa’imman waggaa 18 gadiif maatiin/guddistoonni herrega qusannaa kana banuufii danda’u.
Herregicha banuuf kaffaltii barbaachisu, qarshii 50 kaasee imala Hajii/Umaraa hanga barbaachisuu ol kaawwachuun ni danda’ama ,Hajiiwwan waggaa waggaan deeman dabalatee jechuudha.